တိတိကျကျ ၊ မှန်မှန် ကန်ကန် ၊ မြန်မြန် ဆန်ဆန်လုပ်။ | အ မှတ် တ ရ ။
တိတိကျကျ ၊ မှန်မှန် ကန်ကန် ၊ မြန်မြန် ဆန်ဆန်လုပ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တခုပါ။ အောက်တိုဘာလ ကုန်ခါနီးမှာ အိမ် ခဏပြန်သွားပါတယ်။ Nov ၂ ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့ အခါမှာ ………
ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ Immegration Counter အရောက်မှာ Passport စာအုပ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းများပြသောအခါ….. တာဝန်ကျ Immegration ၀န်ထမ်းက D-Form တောင်းပါတယ်။ D-Form ပြရာ ဘဏ်ချလံ စာရွက်တောင်းရာ မလိုအပ်ဘူးထင်ပြီး မယူလာခဲ့ ပါဟုပြောရာ ထိုဝန်ထမ်းမှ လိုတာပေါ့ ။ ပြန်ယူရန် အချိန်လဲ မရှိတော့ပါ။
ဘဏ်ချလံ သွင်းပြီးမှ D-Form စာရွက်ကျတာ ၊ ဘဏ်ချလံ ထပ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ တမျိုးကြီးပါပဲ။ ထားပါတော့ ၊ ကိုယ့်အမှားဖြစ်နေပြီလေ။ ဒါဆိုရင် ပြန်လာတဲ့ နေ့တုန်းက Immegration Officer နဲ့ ၀င်တွေ့ရပါတယ်။ သူက တလထက်ကြာပြီး ပြန်မှ D-Form လုပ်ပါလို့ ပြောပ်တယ်။ အခု D-Form ကလိုလိုမယ်မယ် လုပ်ထားတာပါ လို့ပြောတော့ ထိုဝန်ထမ်း က Passport စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီး ၊ စာအုပ်မှာ Log no. မရေးထားဘူး ၊ ကျောင်းတက်နေကြောင်း သံရုံးထောက်ခံစာ မပြခဲ့ဘူးလား Copy ၂ စောင်ရောမပေးခဲ့ဘူးလား မေးတော့တာပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ …. ထောက်ခံစာလဲ ပြပါတယ် ၊ Copy ၂ စောင်လဲပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုဒီမှာလဲ မူရင်းပါပါတယ် ဆိုပြီးစာရွက်ပြရာ ၊ ဒါဆိုရင် အရာရှိနဲ့ လိုက်တွေ့ပါ ဆိုပြီးခေါ်သွားပါတယ်။ အရာရှိရုံးခန်းသို့ သွားရာလမ်းတွင်၊ ထိုဝန်ထမ်းအား ၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ က ပြန်လာတာပါ ၊ အဲ့ဒီနေ့က အ၀င်စာရင်းမှာကြည့် ကြည့် ပါ လို့ပြောရာ ၊ အ၀င်စာရင်းမှာ မတွေ့ဘူးလို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ဘုရား ဘုရား လူကိုယ်တိုင် ပြန်ရောက်ပြီး အခုပြန်ထွက် မှာတောင် အ၀င်စာရင်းမှာမတွေ့ ဘူးဆိုတော့ မစဉ်းစားတတ်တော့ပါဘူး။
Immegration Officer ဆီရောက်တော့ အစအဆုံးပြန်ရှင်းပြရ ပြန်ရော။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အ၀င်စာရင်းကိုရှာပရစေ ၊ ဆိုပြီးရှာတော့ ၂၂ ရက် မှာမတွေ့ ၊ ၂၃ ရက်ကိုကြည့် လိုက်တော့ …… တွေ့ပါပြီ ၊ ဒီမှာပါလို့ ပြတော့ ၊ သူတို့ က ခင်ဗျားပြောတော့ ၂၂ ရက်ဆို အခုတော့ တလွဲ တဲ့ ။ မဟုတ်ရပါဘူး ပြန်လာတာ ၂၂ ရက်နေ့ သေချာပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီ မနက်ကမှ သံရုံးမှာ ထောက်ခံစာ ၀င်ယူခဲ့တာပါ။ Passport မှာလဲ Permitted to land Admitted 22 OCT 2007. လို့ တဆိပ်ထုထားပါတယ်။ နောက်တခါ စာရွက်တွေထုတ်ပြရပြန်ရော ၊ အဲ့ဒါနဲ့ သူတို့ အချင်းချင်း ” ဒီကောင်တွေ သေသေချာချာမလုပ်ဘူး ၊ သောက်တလွဲပဲ ” ဆိုပြောပြီး ထိုအရာရှိဆိုသူက ၊ ကဲ စာအုပ်မှာ Log no. ရေးပေးလိုက် လို့ပြောပါတယ်။
Immegration ၀န်ထမ်းက နောက်ဆိုမှတ်ထား အ၀င်မှာ Log no. ရေးခိုင်း Date ကိုသေသေချာချာစစ် ဆိုပြီး သူတို့ ၀န်ထမ်းတွေလုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေကိုလာမှာနေပါတယ်။ မှတ်သားလောက်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် ရေးပေးလိုက်လို့ မဟုတ်ရင် ဒီနေ့ပြန်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
နိုင်ငံတော်ကြီး ကချမှတ်ထားတာက ၊ တိတိကျကျ ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ် ဆိုတာ ဘယ်သူတွေအတွက်ပါလိမ့် လို့ တွေးရင်း Immegration Counter မှကျော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
« Guestbook Album ! Happy New Year 2008 ! »
LIN LET KYAL SIN (12:17:00) :
ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုး ကျွန်မ ဦးလေးလည်း ထပ်တူဖြစ်ဖူးတယ် .. ။ သူလည်း ကံကောင်းလို့ ပြန်လာလို့ရတာတဲ့ ။ အင်မီဂရေးရှင်းက ဒုက္ခပေးလိုက်တာပေါ့ .. ။ သူအလှည့်တုန်းကတော့ ပိုက်ဆံတွေအများကြီးပေးလိုက်ရတယ် .. ။ အဲဒါသာစဉ်းစားကြည့်တော့ .. ။